Ithini na Lento · Umhlobo Wenene FM - iono.fm
UMHLOBO WENENE FM | Podcast , ±12 min episodes every 1 week, 2 days	| Broadcast schedule
XHOSA South Africa Arts
Ithini Na Le Nto
Kusasa endleleni eya evenkileni kuhamba uSkhulu noNosiseko – uSkhulu ubuza ukuba eza mpahla zisevenkileni uzithenge ngaliphi ixesha – uyamhleka omnye esithi ukubuya kwakhe kuLwesine ufike ethengise 3 yonke kodwa kukhona ambuza ngoku ukuba uzithenge nini – uyacaphuka uSkhulu uNosiseko abokukhe aphendule umbuzo
Kusasa uThandi uzokuthenga evenkileni efikela kuSkhulu ambuze ukuba uphi uNosiseko kwathengisela yena – omnye umbuza ukuba akanakuthengisela kanti yena – uyahleka uThandi esithi nantsi i-line inde kucacile ukuba akakwazi ukubala makakhulule nezihlangu – uyacaphuka uSkhulu makathenge ahambe
Kusasa uThandi uyashwabula uNgxekese akasezi nokuza kuqabula ekuseni ngoku ngenxa yokuba unemali – uTubhanana uthi inoba uthenga edolophini okanye e-Bottle Store ayokuselela endlwini
Vuyo to Tamara ongamnakaniyo kuqala ze azazise – omnye uyothuka embuza ukuba ufunani – uVuyo uthi uvile ngoGibson ukuba kube nzima ukuba amnike i-bank account yakhe for ukufakela uLutho imali from uQhinebe
Kusasa uSkhulu usa uNosiseko evenkileni badlula ngakwaNgxekese kuxakekiwe ngabakhi benza i-foundation, uyancoma uNosiseko esithi ngathi iza kubankulu le ndlu kaNgxekese ubona nge-foundation yayo.
Kusasa uMlungisi uvuswa yi-call kaSkhulu ofowuna engxola esithi uza kuqabuka iwe bhumu phantsi laa Sayithi njengokuba elibele kukuhlala apho eGoli eyiyekele kumanxila angoMqokeleli. Akaqondi omnye ukuba uthetha ngantoni.
Kusasa kwaSkhulu uyacaphuka ebuza uNosiseko ukuba zinduli zantoni eziya azibona zikwaNgxekese. Uthi omnye ubone phezolo kumisa ilori yase-Sayithini yothula laa santi, kucacile ukuba bayokha uNgxekese noNolast.
Kusasa kwaSkhulu kuhleli yena noNosiseko olungiselela ukuyovula evenkileni, sibafumana bencokola nalapho uNosiseko ethi uneentloni kwaye uyazisola ngokungavumi ukuhamba noNancy emcela ukuba baye komkhulu.
Kusasa uTubhanana unkqonkqoza egumbini likaThandi osalele emvusa ngetshisayo ikofu, ekwamphathele nentyatyambo ebomvu. Ungena sele esithi: ‘Happy Valentine’s day sisi wam!’ Engaqondi omnye uyabuza ukuba kuqhubeka ntoni?
Morning phone call from Gibson to Khwetshube ebuza ukuba baqhuba njani uyaqhela na umhomncinci wakhe. Uyahleka uKhwetshube esithi ebengamthembanga laa mfazana kaNdomelele kodwa ngoku uyambona ukuba u-right ubalisa izinto azenzileyo.
Kusasa kwaThandi kufika uSizwe sele engxola esithi udade wabo makohlukane nale nto yokuvele ambize, uyasebenza yena. Uyaxolisa omnye esithi naye ugqiba kufowunelwa nguChuma othi i-wedding planner yabo ifuna ukwazi inani labantu abaza kubakhona emtshatweni wabo.
Kusasa kwaNancy kunkqonkqoza kabukhali uThandi otyhola uNancy ngokumfaka amapolisa. Upholile omnye esithi kakade uyazi kwaye uqinisekile ukuba nguye owamosha igadi yakhe.